Home Wararka (Daawo) Sheekh Cali Wajiis oo jawaab adag ka bixiyay weerar uga yimid...
(Daawo) Sheekh Cali Wajiis oo jawaab adag ka bixiyay weerar uga yimid Sheekh Xasan Xuseen
Sheekh Cali Maxamuud Xasan (Wajiis) oo kamid ah culumada kooxda Nabad & Nolol ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadal kasoo yeeray Sheekh Xasan Xuseen (Xasaan).
Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay in Dowladda Kenya ay marti geliso Sheekh baneeyey dhiigga madaxda iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Aniga Dowladda kenya Dowladda Soomaaliyeed ayaa noola fil ah, Dowladda Kenya la hadli maayo sababtoo ah sifo aan kula hadlo ma lihi, balse waxaa nasiib darro ah iyadoo intaas oo dhibaato ah ay argagixisada ku heyso in nin Sheekh ah dalkeeda ku marti geliso kaasoo xalaaleystay dhiigga madaxdeena iyo shacabkeena” Ayuu yiri Sheekh Cali Wajiis.
Wuxuu intaas ku daray in Sheekh Xasaan ay qabri ugu jiraan dad badan oo uu baneeyey Dhiigooda haddana uu doonayo kuwa cusub oo uu dhiigooda daadiyo.
Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya laga rabo inay jawaab cad ka bixiso hadalka kasoo yeeray Shiikh Xasaan.
“Anaga difaaca Badda iyo bariga Soomaaliya oo ay dowladda ilaalineyso waxaa nooga muhiimsan ilaalinta dhiigga shacabka muslimka ah ee Soomaaliyeed, Sharafkooda iyo amnigooda”.
Wuxuu Dowladda Soomaaliya ka codsaday inay Dowladda Kenya ka keenaan inay raali ka tahay joogitaanka Sheekh Xasaan oo ay qeyb ka tahay dagaalka ay kula jirto Soomaaliya ama inay wax ka qabtaan arrintaas, isagoo sheegay inaan loo dulqaadan karin mas’uuliyeedana ay saaran tahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’isulwasaare Kheyre.
Hadalka kasoo baxay Sheekh Cali Wajiis ayaa jawaab u ah hadal uu Shalay sheegay Sheekh Xasaan oo ahaa in madaxda Dowladda Soomaaliya ay yihiin murtadiin.
Sheekh Xasaan ayaa ku nool dalka Kenya, waxaana dhawr jeer qabtay ciidamada Kenya inkastoo markii dambe lasii daayey waxaana lagu eedeeyey inuu garab siiyo kooxda Argagixisada ah ee Al-Shabaab.